Surely Ny Habaka Zavakanto - Famolavolana
Ny Habaka Zavakanto
Ny Habaka Zavakanto Ity no zava-kanto, varotra ary miantsena miaraka amin'ny sehatra iray. Hatramin'ny maritrano ny firafitry ny fantsom-baravarankely amin'ny tsipika vita amin'ny firenena. Ny tranobe manontolo dia mitazona endrika endrika vita amin'ny rindrina, satria ny takelaka sosona amin'ny habaka, dia mamorona tsy fitoviana hafa amin'ny ivelany, dia mamorona traikefa eny amin'ny habaka ihany koa. Miala amin'ny haingon-trano saro-bidy be loatra, mampiasa haingon-trano malefaka mba hampisehoana fialam-boly. Ny tsy fitoviana eo amin'ny famoronana sy ny dingana aloha dia mora kokoa amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny ho avy.
Anaran'ny tetikasa : Surely, Anaran'ny mpamorona : Michael Lam, Anaran'ny mpanjifa : Surely.
Ny Habaka Zavakanto Michael Lam Surely